सान्जेन जलविद्युतको आईपिओ जारी हुने, कहिले देखि ? - ramechhapkhabar.com
सान्जेन जलविद्युतको आईपिओ जारी हुने, कहिले देखि ?
सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको ३६ लाख ५० हजार कित्ता आइपिओ जारी गर्ने भएका छन्। कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपीओ जारी गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। कम्पनीले प्रति कित्ता १०० अंकित दरमा आइपिओ जारी गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले संस्थापक समूहको ५१ प्रतिशत र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्याएकोमा ३९ प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि आइपीओ जारी गरिसकेको थियो । बाँकी रहेको १० प्रतिशत बराबरको साधारण शेयर स्थानीयका लागि जारी गर्न कम्पनीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यो आइपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट रहेको छ ।
करोडको लगानीमा गोरखा गार्डेन सञ्चालन
गोरखा सदरमुकाममा गोरखा गार्डेन होटल सञ्चालनमा आएको छ । गोरखा नगरपालिका–६ को अर्घलेमा ५० करोड रुपैयाँको लगानीमा गोरखा गार्डेन सञ्चालनमा आएको हो । गोरखा गार्डेन होटल प्रालिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गर्दै होटल सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
होटलमा २ स्विट, १० सुपर डिलक्स र ३४ डिलक्स गरी ४६ कोठा रहेको गोरखा गार्डेन होटल प्रालिका अध्यक्ष ऋषिराम पौडेलले बताए । “हामीसँग ४६ रुम छ” उनले भने, “१ सय २५ जना एकसाथ राख्नसक्ने क्षमता छ । गोरखा आएका पर्यटक अब रात बिताउनको लागि अन्य जिल्ला पुग्नुपर्दैन भन्ने विश्वास छ । पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य हो ।” न्यूनतम ४ हजार ५ सयदेखि अधिकतम ११ हजार रुपैयाँसम्म कोठाको शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सेवा सुरु गरेको अबसरमा आउँदो असारसम्म सेवा शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइने अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
होटलमा ४ वटा सुविधासम्पन्न सभाहल रहेका छन् । ३५ जनादेखि ३ सय जनासम्म अट्ने सभाहल रहेका अध्यक्ष पौडेलले बताए । चारवटै हलमा एकसाथ ६ सय मानिस राखेर कार्यक्रम गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । गोरखाको पर्यटकिय गन्तव्यको चिनारी दिने गरी मनकामना, गोरखनाथ, कालिका र लिगलिगकोट हल नामाकरण गरिएको होटलले जनाएको छ ।
१५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको ६ तले होटलको माथिल्लो तलामा स्विमिङ पुल पनि बनाइएको छ । गोरखामै पहिलोपटक स्वीमिङ पुलसहितको होटल सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
होटलमा आउने पाहुनालाई जिल्लामै उत्पादन भएको अर्गानिक खाना खुवाउने योजना रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । “हामी आफैं पनि तरकारी खेती गर्छौं” उनले भने, “व्यावसायिक किसानसँग वार्षिक रुपमा सम्झौता नै गरेर अर्गानिक उत्पादन होटलमा भित्र्याउने योजना छ ।” होटलमा १ सय जनाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने अध्यक्ष पौडेलले बताए । भरतपुर गार्डेन रिसोर्टको समेत संलग्नतामा गोरखा र चितवनका ८२ व्यवसायीले होटलमा लगानी गरेका छन् ।